सामाजिक मिडिया आरओआई - यसलाई बढाउने Simple सरल तरिकाहरू - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B6B बजार समाचार
सामाजिक मिडिया ROI - यसलाई बढाउने Simple सरल तरिकाहरू
सम्पादकको पिक मार्च 8, 2021 मार्च 8, 2021 शेन बार्कर अरबी फ्रीलान्स, B2B, शुरुआतीहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ फ्रिल्यान्स वेबसाइटहरू, ब्लग, व्यापार, Gigs किन्नुहोस् र बेच्नुहोस्, Gigs किन्नुहोस्, चीनियाँ स्वतन्त्रता, सम्पादकको पिक, FGG कम लागत बजार, फ्रीलान्स ग्लोबल गिग (FGG) कम लागत बजार, फ्रेन्च फ्रीलान्स गिग, gigs, बिक्रीको लागि Gigs, ग्लोबल थोक अनलाइन, ग्लोबल विश्व, हिन्दी फ्रिल्यान्स गिग्स, इन्डोनेसिया फ्रीलान्स गिग्स, अनलाइन थोक र B2B, अनलाइन थोक र B2B बजार, पोर्तुगाली फ्रीलान्स गिग्स, Gigs पोष्ट गर्नुहोस्, रसियन फ्रीलान्स गिग्स, गिगहरू बेच्नुहोस्, तपाईंको Gigs विश्वव्यापी रूपमा बेच्नुहोस्, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, साइड Gigs, स्पेनिश फ्रीलान्स गिग, प्रविधि, थोक, थोक - B2B, थोक र B2B बजार, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
बैंकलाई नतोडेर तपाइँको सोशल मिडिया ROI बढाउन चाहनुहुन्छ?
यथार्थवादी लक्ष्यहरू र सही KPIs ले तपाईंलाई तपाईंको मार्केटिंगको साथ अन-ट्र्याक रहन र तपाईंको टीमको मनोबल राख्न मद्दत गर्दछ।
तपाईं सुधार गर्न सक्नुहुन्न जुन तपाईं मापन गर्न सक्नुहुन्न।
सामाजिक मिडिया ब्रान्डको लागि कडा रणभूमि हो। प्रयोगकर्ताको ध्यान अस्थिर छ र प्लेटफर्म एल्गोरिदम अप्रत्याशित छन्। यो रणनीति योजना गर्न कठिन छ कि समयको परीक्षा खडा छ। त्यो भनियो, अब मूर्त कमाउन सजिलो छ सामाजिक मिडिया बाट ROI। किन यस्तो?
इन्फोग्राफिक मार्फत शेनबार्कर.कॉम
धेरै प्लेटफर्महरूले व्यवसायहरूलाई उनीहरूको खाताहरू मोनेटाइज गर्न मद्दत गर्न शपिंग सुविधाहरू प्रस्तुत गर्‍यो। उनीहरूको मार्केटिंग खर्चबाट रिटर्न निकाल्न उत्सुक, सामाजिक-समझका ब्रान्डहरूले नवीन मोनेटाइजेशन रणनीतिहरू क्रिप्ट गर्दैछन्। प्रतिस्पर्धालाई हराउन, तपाईलाई आफ्नै रणनीति चाहिन्छ।
तपाईं कसरी सुरू गर्न सक्नुहुन्छ? एक नजर हेरौं ...
चरण १: तपाईंको लक्ष्य परिभाषित गर्नुहोस्
तपाईंको मार्केटिंग रणनीतिलाई दिशा दिन, तपाईंले आफ्ना अभियानहरूका लक्ष्यहरू र KPIs पहिचान गर्न आवश्यक छ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँका लक्ष्यहरू स्मार्ट छन् (विशिष्ट, नाप्ने, प्राप्य, यथार्थवादी, र समयमै)।
चरण २: तपाईंको लक्ष्यलाई तीव्र पार्नुहोस्
एक स्प्रे र प्रार्थना दृष्टिकोण अब सोशल मीडिया मार्केटिंगको साथ काम गर्दैन। तपाईंले सही व्यक्तिहरूलाई सही समयमा सही समयमा लक्षित गर्न आवश्यक छ। जब तपाइँको सामग्री तपाइँको लक्षित दर्शकको आवश्यकता र रुचि अनुरूप छ, यो इच्छित परिणाम पैदा गर्दछ।
तपाईंको श्रोतालाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि, तपाईं विश्लेषणात्मक उपकरणहरू जस्तै Hootsuite र बफर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यी उपकरणहरूले तपाइँलाई तपाइँको दर्शकहरूको बारेमा अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ, जस्तै तिनीहरूको उमेर, स्थान, व्यवसाय, वैवाहिक स्थिति, र ब्रान्ड एफिनिटीहरू। यी अन्तरदृष्टि प्रयोग गरेर, तपाईं अर्को चरणहरूको लागि विस्तृत खरीददार व्यक्तित्व सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ।
चरण:: लक्षित सामग्री सिर्जना गर्नुहोस्
अर्को चरण तपाईंको दर्शकहरूको लागि आधिकारिक, अद्वितीय, र सान्दर्भिक सामग्री सिर्जना गर्नु हो। यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँको सामग्री लक्षित प्रत्येक प्लेटफर्मको लागि अनुकूलित छ। अन-ट्रेंड सामग्री बनाउनु पनि त्यस्तै महत्त्वपूर्ण छ किनभने सामाजिक मिडिया प्रयोगकर्ताहरूले बासी सामग्रीलाई वेवास्ता गर्छन्।
अरु के छ त?
यसले विभिन्न सामग्री ढाँचाको मिक्सको साथ सामग्री क्यालेन्डर सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ। यस तरीकाले, तपाईं विविध सामग्री उपभोग गर्ने बानी भएका व्यक्तिहरूलाई पूरा गर्न सक्नुहुनेछ।
चरण:: तपाईको प्रोफाइल अनुकूलन गर्नुहोस्
तपाइँको सामाजिक मिडिया प्रोफ़ाइल सही, पूरा, र कीवर्ड अनुकूलित राख्नुहोस्। सबै प्रासंगिक व्यापार विवरणहरू समावेश गर्नुहोस् र एक अविस्मरणीय प्रयोगकर्ता नाम चयन गर्नुहोस्। तपाईंको बायोमा तपाईंको वेबसाइट / ब्लग र अन्य सामाजिक मिडिया खाताहरूमा लिंकहरू राख्न नबिर्सनुहोस्।
चरण:: लाभ उठाउनेहरू
तपाइँ प्रभावकर्ताहरूमा पिगीब्याक गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूको ब्रान्ड उनीहरूको संलग्न अनुयायीहरूको अगाडि राख्नुहोस्। जब प्रभावकारीहरू तपाईंको लागि निश्चित हुन्छन्, तपाईं विश्वासनीयता, उद्योग अधिकार, र बिक्री पनि कमाउनुहुन्छ।
त्यहाँ धेरै तरिका छन् तपाइँको प्रभावकारी लाभ उठाउनुहोस्को क्लउट। उत्पाद समीक्षा, भिडियो प्रशंसापत्र, प्रायोजित पोष्टहरू, र विज्ञ साक्षात्कार ती हुन्।
चरण:: ट्र्याक गर्नुहोस् र तपाईंको प्रदर्शन मापन गर्नुहोस्
तपाईं सुधार गर्न सक्नुहुन्न जुन तपाईं मापन गर्न सक्नुहुन्न। त्यसो भए, KPIs का बिरूद्ध तपाईंको अभियानको विश्लेषण जारी राख्नुहोस्। चरण १ मा पहिचान गरिएको कन्ट्रीक नम्बरहरूमा तपाईंको प्रदर्शन क्यालिब्रेट गर्न प्रयास गर्नुहोस्, वेबसाइट ट्राफिक, ब्रान्ड उल्लेख, र अनुयायी वृद्धि।
त्यो हो। तपाईंको सोशल मिडिया मार्केटिंग आरओआई बढाउनु कुनै केकवाक छैन, तर यो असम्भव पनि छैन। माथि उल्लिखित रणनीतिले तपाईंलाई एक महान सुरुवात दिन्छ। विस्तृत रूपमा प्रक्रियाको बारे पढ्न, तल इन्फोग्राफिक जाँच गर्नुहोस्।
सांप्रदायिक समाचार सामाजिक संजाल सामाजिक मिडिया मार्केटिङ सामाजिक मिडिया रोइ सोशलमेडियामार्केटिंग
शेन बार्कर, सीईओ र शेन बार्कर परामर्श मा डिजिटल मार्केटिंग परामर्शदाता।
सबैभन्दा लामो दायराको साथ Electric इलेक्ट्रिक कारहरू
टेलिकम डिजिटलाइजेशनको माध्यमबाट कसरी उद्योग क्रान्ति गर्दैछ?